इम्युलेटर.अनलाइनबाट मस्तिष्क खेलहरू onlineplay अनलाइन
मस्तिष्क खेलहरू। मार्फत तार्किक तर्कको विकास गर्दै मस्तिष्क खेलहरू महत्वपूर्ण छ। न केवल यसले तपाईंलाई रोजगार ईन्टरव्यू वा कलेज परीक्षामा राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ, तर यो तपाईंको मस्तिष्क व्यायामलाई राख्न पनि महत्त्वपूर्ण छ, मेमोरी सुधार, र साधारण कार्यहरू प्रदर्शन गर्न सजिलो बनाउँदै .
यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँ केही समय मा आफ्नो दिमाग प्रशिक्षित छैन, तपाइँ यो गर्न सुरु गर्नुपर्छ। तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ उनीहरूको विकास र शिक्षाको लागि क्षमता जीवनको अन्त्य सम्म रहन्छ, त्यसैले यो तपाइँको सोच को प्रशिक्षण गर्न कहिले ढिला छैन।
BrainGames: कसरी चरणबद्ध चरण खेल्ने? 💡
चेकरहरू अनलाइन नि: शुल्क खेल्नको लागि यी चरण-देखि-चरण निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस् :
चरण 1 । तपाइँको मनपर्ने ब्राउजर खोल्नुहोस् र मा जानुहोस् Emulator.online खेल वेबसाइट।
चरण2। वेबसाइटमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै, खेल पहिले नै स्क्रिनमा प्रदर्शन हुनेछ। तपाईले क्लिक गर्नु पर्छ प्ले र तपाइँ खेल सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
4 कदम। कार्डहरू माथि राख्नुहोस् कि ती समान जोडीबाट हुनुपर्दछ। खेल समाप्त हुन्छ जब तपाईं सबै कार्डहरू बढाउनको लागि प्रबन्ध गर्नुहुन्छ। जति सक्दो चाँडो तपाईं समाप्त गर्नुहुन्छ, तपाईं खेल समाप्त नभएसम्म स्तर पार गर्नुहुनेछ।
ब्रेन गेम Meaning को अर्थ
ब्रेन खेलहरू, वा तर्क खेलहरू , ती खेलहरू हुन् जुन राम्रो कार्यान्वयनको लागि मानव तार्किक तर्कलाई उत्तेजित र उत्तेजित गर्दछ।
यी खेलहरूको विशेषता छ मानव तर्कसंगत पक्ष को विकास गर्ने, प्रयोगकर्तालाई प्रयोग गर्नुपर्दछ, ठूलो हदसम्म, उनीहरूको बौद्धिक पक्ष सही समाधानमा पुग्नको लागि।
यी तर्क खेलहरू व्यापक रूपमा थेरापिष्टहरूले प्रयोग गर्छन्। दुबै चिकित्सा सल्लाहको लागि, निवासहरूमा नियमित भागको रूपमा, वृद्धहरूले यी गर्दछन् रोगबाट बच्न मानसिक व्यायाम।
ब्रेन गेमको उदाहरणहरू समावेश गर्दछ शब्दकोष, शब्द पहेली, पहेलियाँ, Sudoku पहेली र एक लामो आदि
ब्रेन गेम गेम्स🤓 का फाइदाहरू
मानसिक व्यायाम धेरै फाइदाजनक छ। अध्ययन अनुसार, निश्चित मेमोरी प्रशिक्षण अभ्यास "बुद्धिमत्ता प्रवाह," बढाउन सक्छ क्षमता र नयाँ समस्याहरूको समाधान गर्न।
मस्तिष्क खेलहरूका लागि दुई खेल मोडहरू छन्। त्यहाँ छन् व्यक्तिगत खेल र समूह खेलहरू।
व्यक्तिगत मस्तिष्क खेलहरू तार्किक, विश्लेषणात्मक, भिजुओपास्टियल तर्क, मोटर समन्वय, कार्य स्मृति, र पार्श्व विचार सोच्न प्रोत्साहित गर्नुहोस्।
जब एक व्यक्ति एक्लै खेल्छ, तिनीहरू तीव्र आत्मनिर्भरताको एक क्षण अनुभव गर्छन् र तिनीहरूको शक्ति प्रयोग गर्छन् व्याख्या र समस्या समाधान । त्यस समयमा तपाईसँग विश्लेषणात्मक र जीवन-लागू प्रणालीहरू सिर्जना गर्ने क्षमता छ।
सामूहिक खेलहरू तिनीहरूको पक्षका लागि, प्रतिस्पर्धी र / वा सहकारी अवस्था अनुकरण , व्यवहार मा राखिएको सबै कौशलता, पारस्परिक सम्बन्धको अतिरिक्त।
अब जब हामी एक सक्रिय दिमाग को फाइदा थाहा छ, यो उत्तम हुनेछ क्रममा दैनिक दिनचर्यामा ब्रेन गेम अभ्यास समावेश गर्नुहोस् यी सबै सुधारबाट फाइदा लिन र ठूलो दिमाग प्राप्त गर्न।
मस्तिष्क खेल को प्रकार 💡
खेल अमेरिकी होवार्ड गार्न्सले सिर्जना गरेको हो र मा सहयोग गर्दछ तार्किक गणितीय तर्क, एकाग्रता र योजनाको प्रशिक्षण । तपाईं यसलाई अनलाइन वा पत्रिकाहरूमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
चेकरहरू खेल्दा हामीलाई बनाउँदछ दुबै मस्तिष्क गोलार्ध व्यायाम गर्नुहोस् । मनोवैज्ञानिकहरू र न्यूरोबायोलॉजिष्टहरूले अध्ययन गरेका छन् कि रणनीति गेमहरूले मस्तिष्कलाई कसरी मद्दत गर्दछन्, र यो पत्ता लागेको छ कि चेकर्सहरू खेल्दा मस्तिष्क क्षेत्रहरूको भीड एकैसाथ सक्रिय हुन्छ, जसले अल्जाइमरलाई रोक्न पनि मद्दत गर्दछ।
Angry Birds को उही सिर्जनाकर्ताहरूबाट, अद्भुत एलेक्स खेलले प्रयोगकर्तालाई प्रोत्साहन दिन्छ तिनीहरूको सामरिक कौशल विकास गर्नुहोस् प्रस्तुत समस्याहरूको समाधान गर्न र चरण पार गर्न।
यस खेलमा प्रयोगकर्ताको लक्ष्य एउटै र colors्गमा ट्यूबहरू जोड्ने र एउटा अनुक्रम सिर्जना गर्ने लक्ष्य राख्दछ। त्यहाँ धेरै चुनौतिहरू छन् तर्क, समस्या समाधान, चपलता, र एकाग्रताको साथ मद्दत गर्दछ।
एउटा पुरानो खेल जुन अहिले पनि विश्वभर बाट खेलाडीहरूलाई आकर्षित गर्दछ। आधार सरल छ: सक्षम हुन शब्द अनियमित अक्षरहरूका बीचमा शब्द बनाउनुहोस् । म्यागजिनमा छापिएको संस्करणका अतिरिक्त, यो मोबाइल संस्करणहरूको लागि खेल फेला पार्न सम्भव छ।
एउटा खेल, शतरंज मानिन्छ कल्पना, रचनात्मकता, सामाजिक, संज्ञानात्मक र संचार कौशलको विकास सुधार गर्दछ । थप रूपमा, खेल मस्तिष्क प्रशिक्षणको लागि महत्त्वपूर्ण सहयोगी हो। खेल शारीरिक वा अनलाइन चेस खेल वेबसाइटहरू र अनुप्रयोगहरूमा खेल्न सकिन्छ।
यी ब्रेन खेलहरूको साथ तपाईं आफ्नो दिमागलाई तालिम दिन सक्नुहुन्छ र तार्किक प्रश्नहरूको साथ राम्रोसँग डिल गर्न सक्षम हुनुहोस्, या त तपाईंको परीक्षाको लागि वा केवल किनकि तपाईं आफ्नो दिमागमा आकार राख्न चाहनुहुन्छ।
मस्तिष्क खेल नियमहरू
तर्क खेलको सार्वभौमिक नियम हुँदैन, प्रत्येक एक आफ्नै नियमहरु संग खेलाइन्छ, तर ती केहि मा सामान्य छ।
हामीले पर्छ संज्ञानात्मक ज्ञान सक्रिय गर्नुहोस् जस्तै निरीक्षण, पहिचान, पहिचान, तुलना, लोकेटिंग। र तार्किक तर्क, अगाडि योजना बनाउने, निर्णय लिने र अन्तर्ज्ञान प्रयोग गर्नुहोस् अस्खलित र कुशलताका साथ खेल खेल्नको लागि।
एक रूपमा ब्रेन गेमको उदाहरण हामी चेस प्रयोग गर्न सक्छौं । यदि हामी यसका नियमहरू, विशिष्ट आन्दोलनहरू, रणनीतिहरू पढ्छौं जुन शत्रुहरूको टुक्राहरू लिन र राजालाई मार्नको लागि अनुसरण गर्न सकिन्छ, तब हामी यस किसिमको मनोरञ्जनको लागि हाम्रो मनलाई कत्तिको जटिल र रमणीय ठान्छौं भन्ने कुराको कल्पना गर्न सक्छौं।
ब्रेन खेल सल्लाहहरू 🤓
तर्क खेल हाम्रो दिमाग को लागी एक चुनौती, र पनि हाम्रो धैर्य पैदा गर्दछ। ब्रेन खेल छनौट गर्दा, साधारण खेलहरूसँग सुरू गर्नुहोस् जुन तपाईंको दिमागलाई चुनौती दिन्छ।
केहि सरल तर रमाईलो छन् मेमोरी खेलहरू । स्थिति र केहि कार्डहरूको रेखाचित्र सम्झेर सुरूवात गर्नुहोस्, र तपाईंको होल्डिंग क्षमता बढ्दै जाँदा संख्या बढाउनुहोस्। पुरस्कृत हुनुको अलावा, यो एक हो सबै उमेरका लागि खेल , ताकि तपाईं आफ्ना बच्चाहरू संग खेल्न सक्नुहुन्छ।
यी खेलहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको रमाईलो छ, किनकि तपाईंलाई मनोरन्जन गरेर उनीहरूले तपाईंको दिमागलाई यति छिटो र चाँडो गर्दैनन् संज्ञानात्मक कौशल यी चुनौतीहरू संकेत हुन सक्छ कि विकसित , यो महसुस नगरी पनि।
को फाइदा लिनुहोस् मस्तिष्क खेलहरूले प्रदान गर्ने धेरै फाइदाहरू र यस परिवार बीचमा हजारौं खेलहरूमा रमाईलो गर्नुहोस्।
तपाइँ नाटकलाई के हिर्काउन प्रतिक्षा गर्दै हुनुहुन्छ?